रविले भने- पार्टीको झोला फिर्ता गरीदिनुस त्यहि दिन देखि तपाईको र देशको भविष्य राम्रो हुनेछ ! « News24 : Premium News Channel
रविले भने- पार्टीको झोला फिर्ता गरीदिनुस त्यहि दिन देखि तपाईको र देशको भविष्य राम्रो हुनेछ !
राजनीतिक पार्टीहरुले खडा गरेका उम्मेदवारहरु देखेर कहिलेकाँहि त मुड नै अफ हुन्छ । काम न काजका नमुनाहरुले ठुला दलको टिकट पाउँछन् । तर हामी मध्ये अधिकाशं मानिस कहाँ स्वतन्त्र जनता छौँ र ? कतै बाउबाजेको बिँडो थाम्न एउटा पार्टीको झोला बोेकेका छौ त कतै केही पाइन्छ कि भन्ने आशले अर्को पार्टीको झोला बोकेका छाँै ।
फेरी पार्टीले गतिलो उमेदवार खडा गरे पनि ज्यान दिएर भोट माग्न हिँड्ने, पार्टीले टिकट दिन्छ बेकम्मा लंगुरलाई त्यहि पनि उसैलाई महान नेता मानेर दिनरात भोट माग्ने कार्यकर्ताहरु देखेर साँच्चै नै दया लाग्छ । फेरी पार्टीको नाम मात्र हेरेर विजय गराइएका केही नमुनाहरुले गाँउ शहरको कुन हाल गरीरहेका छन् त्यसको सानो तिनो झलक त हामीले हेरी पनि सक्यौ ।
पार्टीको टिकट पाउने हर नुमनाले चुनाव जित्ने हो भने हामीले विकास भन्ने शब्दलाई विर्सीदिए हुन्छ । फेरी असल इमान्दार,भिजनरी व्यतmी जुन पार्टीको भएपनि केही गरेर देखाउन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरीसकेका लिडरहरु थोरै भएपनि छन् यहाँ । यि ठुला पार्टीहरु पनि यति घमण्डी भैसके कि
उनिहरुलाई लाग्छ हाम्रो चुनाव चिन्ह बोकेर उठ्ने हर लंगुरले चुनाव जित्छ वा हारेपनि धेरै मत ल्याउँछ । सबै मतदाता विवेकी छैनन् तर कार्यकर्ताहरु भने चेतनशील छन् ।
त्यसैले कार्यकर्ता साथीहरु आफ्नो पार्टीलाई भनिदिनुस कि पैसा मात्र भएको तर केही गर्न सक्ने साहस,क्षमता र भिजन नभएको व्यक्तिलाई टिकट दिनुभयो भने हामी त्यसको पछि लाग्दैनौ । यति भन्दा पनि पार्टीले मान्दैन र गलत मान्छे छानेर तपाईलाई जिताउने जिम्माा लगाउँछ भने गर्व साथ सो पार्टीको झोला फिर्ता गरीदिनुस । तपाईको भविष्य र यो देशको भविष्य त्यसै दिनेदेखी बन्न शुरु हुन्छ ।